TPLF yakka Oromoo irraatti raawwacha jirtuti lammiin Tigire hundatu itti Gaafatama !!!
1.TPLF yakka raawwacha jiru ta'ee jeedhe sanyii Oromoo baleesuuf waan itti yaade hojeechaa jiruuf yakki kun waan dhiifmaa goodhamuf miti.
2. Dargagoota Oromoo fi saba Oromoo mirga isaa kara nagaa gaafate lafa isaa irratti gara jabinan waan fixaanif.
3. Abayi Tshaye fi Dr. Debretsion Gebremichael samicha lafa irra darban duguga sanyii baleesaa Gutuu Oromiyya keessatti yeroo rawwatan fi raawachisan uummani Tigiray deggersa goodheef.
4. Milishaa Nannoo Somalee hidhachiisun Oromoo lafa isaa irra buqisu irra darban jarsolii fi da'imani Oromoo Harargedha kassani hanga Booranati ficiisisa jiru, kun Ajeeja Samora Yenusif, Getachew Asefa fi Ogannoota Komand Post akkasuma Prezdanti Nannoo Somale ergachuudhan yakka sanyii ballessa raawacha jiru, kun yeroo ta'uu Jarsolin Tigiray, Dhaabi TPLF goocha kana balaalefaachuu dhisani deggera jiru, kun yakka sanyii baleesuti, yakka kana dhaabilee Adunya mootumman USA, UK fi EU siiriti beekuu, dhummatiin saba Hararge irratti raawwatama jiru kun lammii Tigirayf badi isaa yamuu ta'uu lammiin Ogaden yakka kana deggeran ilee badii isaan eggatuu irra hin dandamatan.
5. Ijoolleen Oromoo Afaan Oromoo qoofa waan beekanfi Finfinne fi Feederala keessa akka hin galee goodhan kun yakka sanyii balessa Oromoo irratti raawwatama jiru keessa isaa tokko dha. TPLF Finfinnee fi Federalati Afaan Oromoo Afaan hojii Federala goodhe furmata kenu dhise jeequmsa wal irra hin ciine akka dhalatuu goodhee Oromoo fixaa jira, kun ammoo Ethiopian akka atataman diigamtuu goochuuf bombi awwaleme dha, miseensoota OPDO dabalate kana booda Oromoon Bilisummaa ba'uun ala furmata akka hin qabne raga ba'an jiru. Oromoo Conference London irratti Dr. Gudata obbo Liban Filate fi obbo Jawwar Mohammed jeechoota hama dubatan jedhamee kan Habasha iyyisise sun nu ammoo hin xiiqate jene iyya jira Oromoon Ethiopia Oromoo dhiiga dhangalaftuu diiguu qoofa utuu hin tanee akka isheen karta Adunya irra badu goochu irratti hojeechu qabu, London irratti Wari mirga Oromoof falmatan galatefatamuu qabu, sabbabiin isaa waan Oromoo irratti raawwatama jiru waan obsa nama laatuu miti, waan dhala namaf hin maleetuu Oromoo irratti raawwatama waan jiruf.
5. Lammiin Tigiray fi Mangudoon Tigire yeroo ijooleen isaan Oromoo fixaan caliisaan iaaluu irra darban jabadha jeedhan jajjabessa waan jiranf, yakka Oromoo irratti raawwatameef lammin Tigiray addabi gudatuu akka isaa egatuu beeke TPLF goocha isaa irra atataman akka dhabatuu goochuu qaba.
7. Ummani Oromoo lammi kamiyuu ta'ee naannoo Oromiyaati simatee of keessa jirachisuu hin qabu, keesumatti Habasha mirga Oromoo hin kabajne akka Tigire fi kan biroon Oromiyya keesaa basuu qaba, Habasha kamiyuu irra bituu fi itti gurgurun yakka jedhee labsuu qaba, qeerroon Oromoo kana rawwachisuu fi barsisuu qaba. Diini Boo'icha keenya irratti dhiichisee hundi Oromiyaa keessa ba'uu qaba, Gaanfi Afrika kan Oromooti hundi ishee guyya itti gaafatamtu ni dhufa.
Yeroo Ummani keenya Milishoota Somalee TPLF hidhachisen dumata jiru fi Komandi Postin ajjeefama jiru caalifne waan teenyuu miti, waan hara goonuu fi waan gaafa tokko goodhamuu hunda halkan guyya irratti hojeechuu qabna, Namni Oromoo ajjeese hundi du'uu qaba akkakkayuu Torban, yakkii Oromoo irratti yeroo dalagamuu wari hara nu irratti caaliisan ilaalan akka USA, EU, AU fi mootummon Hoola keenya boori nu dura dhabachuu akka mirga hin qabne asuman isaan hubachisuu feena.